Brindle Imbwa Inobereka: Chinyorwa che9 Akanaka & Tiger-Akamisikidzwa Canines - Inobereka
Brindling inokonzerwa neakanyanya geni, zvichireva kuti mumwe kana vaviri vabereki vanofanirwa kutakura brindle geni kuti vagadzire brindle puppy.
Brindle imbwa dzinza ndedzimwe dzinoonekwa dzinoyevedza canines dzinozivikanwa kumurume.
Nguo yavo ine mitsetse yengwe Iro iconic ruvara runokonzerwa neasingawanzo geni.
Iyi pateni inowanzoonekwa semavara madema pane jena kana jasi rehusiku. Nekudaro, kune zvekare nzira yekudzosera kumashure iyo ine mitsetse yakapfava shava inogara pane rakasviba kana rakasviba bhachi.
Brindling inogona kutora iyo yese yejasi, asi inogona zvakare kuonekwa mune akasarudzika matinji, kazhinji kazhinji kumashure kwembwa.
Iyo pateni zvakare haina kugara yakasarudzika, dzimwe nguva iwo maviri mavara ari padhuze kwazvo mu pigment.
Kufarira? Verenga pamusoro kuti uwane mapfumbamwe emhando dzemabhuruki aungade kufunga nezvewe unotevera chipfuwo.
1. Mutambi wetsiva
7. Gomo Cur
9. Dutch Mufudzi
Pamwe imwe yeiyo icon brindle imbwa dzinoberekesa, iyi coloring yakajairika kwazvo muBoxer mbwa.
Saizvozvo, brindle imwe yemaviri mavara inozivikanwa neAmerican Kennel Club yeiyo Boxer.
Mabhokisi, senge rudzi rwechibereko vanozivikanwa kuve vakangwara uye vane simba kwazvo.
Hunhu hwavo hwesimba (Yakabatanidzwa nehunhu hwavo husina musoro) dzinovaita mhuka dzinovaraidza dzakakura kune chero vasina kuroora, vaviri kana mhuri, vachitsvaga iri-yako-kumeso imbwa dzinza.
Rudzi urwu haruna kuwana memo yekuti vanorema 55 kusvika 70lb, asi ivo vanonyatso tenda kuti ivo lapdogs uye vachapedza chero nguva iwe wakagara pasi uchiedza kukwira mumakumbo ako.
Nekudaro, nepo maBoxer achiwanzo imbwa dzinofara, vachirarama hupenyu hwakareba, vangangove varidzi vanofanirwa kuziva nezve zvinogona kuita njodzi dzehutano.
Mabhokisi, senge rudzi rwekuzvarwa rwunogadzirirwa mamiriro ezvinhu emoyo senge Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, inowanzo kuzivikanwa se 'Boxer Cardiomyopathy' nekuda kwekuwanda kwayo murudzi.
Kune zvakare humbowo hwegomarara mukati merudzi, pamwe nekufungidzirwa 38.5% yevakafa vari vane hukama nekenza .
Usarega zvavanogona kuita nezvehutano zvichikuisa kure, maBoxers anowanzo ane hutano, anofara, imbwa dzine rudo dzinoisa pamhuri dzadzo.
Rudzi urwu rwakangwara runogona kunge rwuri mutambo wakanaka kune chero varidzi vane ruzivo vachitsvaga yavo inotevera chipfuwo.
Kusiyana neBoxer, brindle haina kujairika kune imbwa yeDachshund , kunyangwe izvi, iyo brindle pateni inogamuchirwa uye inozivikanwa nemhando yekubereka.
Zvisingashamisi, mukurumbira webrindle dachshunds iri kuwedzera zvishoma nezvishoma sembwa dzakadai saBarney ratidza nyika kuti imbwa dzinoyevedza uye dzinonakidza dzinogona sei kuva.
Serudzi, maDachshunds anowanzo kuve anozivikanwa nekuomerera kwavo uye sassy hunhu.
Idzi imbwa diki vanowanzo kukuudza zvavanoda nemaoko mashoma akaiswa zvakanaka uye vacharamba vachihukura kana vasina kuwana zvavanoda.
Varidzi verudzi urwu vanowanzo kuseka kwavo kweupenzi uye hunhu hunhu.
Dachshunds zvakasununguka kuziva, kuongorora uye nenzvimbo, vasingazive kuti havasi kutyisidzira pa8 kusvika 11 inches kure!
Mushure mekuongorora kwakanaka kwenzvimbo, vanofarira kuenda pamakumbo ako ekutsvoda uye kukwatira. Zvechisikigo zvine rudo, rudzi urwu rwakazvipira zvizere kune muridzi wayo kana varidzi.
Iyi yakangwara brindle inobereka inopfuura pakuteerera uye nekunyepedzera kudzidziswa. Zvisinei, iwe unogona kunge uine basa rinogutsa canine yako kuti utambe bhora, vanogona kunge vakaomesa musoro.
Vanopindura chaizvo kunyatso kusimbisa uye nekudaro mijenya mibairo inodikanwa kuti uve nechikurudziro pooch.
Zvishoma zvinozivikanwa zve iwo maviri maCorgi anobereka , Cardigan Welsh Corgi imhuka yakazvipira.
Zvinonzwisisika zvine hungwaru uye zvemitambo, imbwa idzi dzinogona kunge dziri mutambo wakanaka kune chero munhu anotsvaga chipfuwo chaanogona kukwikwidza kumitambo ye canine senge kugwinya, kuteerera kana kunyangwe miedzo yembudzi yemakwai.
Sezvineiwo, iyi pooch pakutanga akachererwa kufudza mombe .
Imbwa dzakapfupika hadzina kurohwa nemombe dzavaifudza, nekudaro varimi vakatanga kukudziridza imbwa diki dzakadzika. uye Corgi akaberekwa.
Zvakare nekudiwa kwakawanda kwekurovedza muviri (pakati pemaminetsi makumi matatu nemakumi mashanu nemazuva ese), imbwa iyi inoda tsika yekushambidzika yakasimba.
Akakora brindle majasi maviri ane akanyanya kukwirira kudurura , uye semhedzisiro ichada kushambidzika mazuva ese mashoma.
Kushambidzika kunoshandira zvinangwa zvakawanda, zvinoita senzira yekuti varidzi vasunge nembwa yavo, asi zvinonyanya kukosha kune iyi imbwa brindle; inobvisa bvudzi rakasununguka uye bvudzi rakakwenenzverwa jasi.
Whippets imwe imbwa brindle uko iyi pateni ruvara inowanzoonekwa.
Sekuberekana, maWhippets anonyanya kufarira vanhu, kunakidzwa nekupedza nguva nevaridzi vadzo nekusangana nevanhu vatsva.
Kazhinji kutaura, iyi canine haisi fan yakakura yekugara nezvipfuwo zvidiki, pachinzvimbo iye anofarira kugara mumhuri maari iye oga chipfuwo.
Zvikwapuro zvinozivikanwa kuve zvakanaka nevana sezvavanogadzira wakanakisa wekutamba naye; hunhu hwavo hwakapusa hunogona kufadza vana vadiki kwemaawa.
Nekudaro, senge imbwa dzese, mutambo unofanirwa kugara uchitariswa kudzivirira kukuvara kune vese mwana nembwa.
Rudzi urwu inonzi 'chombo chinotsvaga kupisa' , nekuda kwetsika yavo yekuda zvinhu zvese zvinodziya.
Kunyangwe ichigara ichishandiswa sembwa inokwezva imbwa, rudzi urwu runokurumidza rune simba shoma.
Paavhareji, vakomana ava vanongoda kufamba kwemaminetsi makumi matatu zuva rega rega, mushure meizvozvo vangangopeta pamubhedha wako vorara kunze kwezuva rese.
Iyo isingawanzo uye yekare imbwa dzinza, iyo Akita imbwa brindle umo isu tinoona zvese zviri zviviri brindle uye inodzosera brindle pateni.
ChiJapanese pakutanga , imbwa iyi yakatanga kuberekwa kuvhima nguruve nemapere.
Naizvozvo zvinomira kufunga kuti iyi canine yakashinga uye yakasimba; akavimbika uye ane rudo kumhuri yavo.
Kune maviri akasarudzika eropa reAkita:
Munyika zhinji, dzinoonekwa sevanhu vakapatsanurwa, zvisinei pasi peAKC, dzinoonekwa sedzimwe rudzi dzine mitsara miviri yeropa.
Sezvo Helen Keller akaunza Akita kuUnited States muna 1937, vanga vari kubudirira ipapo ipapo.
Inozivikanwa yesimba ravo uye isina hukama, ichi hachisi chizvarwa chevaridzi venguva yekutanga.
Hunhu hwavo hwekuzvimiririra uye apo neapo hunodzvinyirira hunogona kubata avo vasina kujaira rudzi.
Akitas anofarira kufarira kugara mudzimba umo ndimo mune imbwa chete, kunyanya pabonde ravo. Kusanganiswa kwemurume / mukadzi kunogona kunge kwakanaka, zvisinei hazvo rudzi urwu runofarira kuve rwega chipfuyo mumba.
Kunyangwe paine nharo uye neropa nhoroondo, Staffordshire Bull Terriers ( kana Staffie kwenguva pfupi ) vanozivikanwa nehunhu hwavo hwerudo uye hune rudo.
Muchokwadi, zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, iyi imbwa inokwenenzvera inokurudzirwa neKennel Club kumhuri dziri kutsvaga chipfuwo.
Idzi imbwa dzinogona kuuya nemavara mazhinji:
Nepo aya mainiini akange akaverengerwa kudzora tupukanana nemitambo yeropa, iko zvino kwanyanya kuwanda kuzviwana semhuka dzinovaraidza.
Ivo vanozivikanwa nehunhu hwavo hwakapfava, kazhinji kutaura, vanofarira kushandisa mazuva avo vachidya, kurara uye kutamba (mune izvo zvinoteedzana)!
Kunge imbwa zhinji, Staffies ane simba rakanaka uye anoda kutenderera awa rekurovedza muviri zuva rega rega. Nekudaro, ivo vanoita zvakanaka kwazvo semhuka dzinovaraidza yemhuri, sezvo nhengo dzese dzemhuri dzinogona kupinda mukati nekubatsira nekufamba imbwa.
Ivo vanodawo kutamba, tug mitambo inowanzo kuve yavanofarira, iyo inogona kupa kune ese ari maviri epanyama uye epfungwa kukurudzira.
Rudzi urwu hausi imbwa yaunosangana nayo mazuva ese, uye zvakadaro iyo Mountain Cur inozivikanwa neyavo brindle jasi .
Muchokwadi, irudzi urwu runowanzoonekwa mumhando yebrindle!
Kutanga kuonekwa mumidwest panguva yekufamba kwemapiyona , imbwa iyi inozivikanwa nekushinga uye kuvimbika kwayo.
Sezvineiwo, iyo cur yakapotsa yatsakatika muma1940s panguva yekufamba kuenda kumaindasitiri. Nekudaro, nekudzoka kuchinyakare kuchionekwa muUnited States, Cur yave ikozvino kuwedzera zvakare .
Nekuda kwekushomeka kwavo, Mountain Cur's haina kuchipa; paavhareji, idzi imbwa dzinodhura pakati pe $ 300 ne $ 3,000 USD.
Izvi zvinogona kuve nekuda kwehunhu hwekuratidzira hwevabereki uye Mountain Cur's inowanzo kukwikwidza mumitambo ye canine senge flyball kana kufudza, izvo zvinokwidza mutengo wembwanana dzavo!
Hunhu hwavo hwekudzivirira hunobva ku mavambo avo sembwa yepurazi , nanhasi imbwa iyi inoda kushanda uye haigoni kushivirira kufinhwa.
Kupfuura izvi, nekuda kwekuteedzera kwakasimba nhungamiro, iyi imbwa brindle ine chimiro chine hutano nembwa dzinowanzo rarama kuita makore gumi nematanhatu.
Yakagadzirwa iconic ne Toto muWizard yeOz , Cairn Terriers imbwa yakasarudzika imbwa.
Kwete chete yavo yejasi inodzivirira mvura, asi inoshandura ruvara sezvavanokura!
Imbwa dzinopwanya sembwanana dzinowanzo kuve nhema, shava kana sirivheri pavanokura.
Zvinotendwa kwese kuti Cairn Terrier ndeimwe ye iyo yekare terriers pasi .
Rudzi urwu rwakatanga paIsle yeSkye muScotland, pakutanga yainzi Skye Terrier. Nekudaro, angangoita makore zana apfuura kuberekana kwakasarudzika kwakagadzira mitsara miviri yakapatsanuka:
Iyo Skye Terrier
Iyo Cairn Terrier
Chinhu chimwe chete chekucherechedza nezve Cairn Terrier ndechekuti ivo vanowanzo kuve hypoallergenic , zvichireva kuti ivo vakakodzera kune vanorwara.
Kunge mamwe ma terriers, iyi canine inoda kuhukura nekudzingirira tupuka semakonzo nemakonzo; Nekudaro, iyi imbwa inogona kunakidzwa nekudzingirira mhando mhando nehwema mabhora.
Panyaya yehunhu, Cairn Terriers vane huta, vanoseka uye vakavimbika.
Ivo vanoshingairira, vanoda kutamba, kumhanya, kufamba uye kazhinji kazhinji vari kunze. Vanosarudza dzimba dzinogara dzichipinda mubindu, asi dzinogona kuchinjika uye dzinogona kubudirira munzvimbo zhinji.
Imbwa dzeDutch Mufudzi dzingave imwe ye mhando dzinofuratirwa dzinofuratirwa , asi izvi hazvivatadzise kubva mukugadzira zvipfuyo zvakanaka
Rudzi urwu rwunozivikanwa nehungwaru hwavo uye zvemitambo, pamwe nehunhu hunochinja.
Kunyangwe zvisingawanzoitika mumhuri yeMufudzi, hazvishamise kuona iyo Dutch Mufudzi ane brindle jasi.
Rudzi urwu rwakatanga, semamwe marudzi mazhinji emufudzi, sembwa yepurazi, asi iri ikozvino inowanzo kuwanikwa muchiuto kana mapurisa basa.
VaDutch vafudzi vanoita zvakanaka pachinzvimbo ichi nekuda kwesimba ravo rekugadzirisa matambudziko uye kudzidziswa.
Kushanda vafudzi veDutch kazhinji zvinouya kubva pamutsetse wembwa dzinoshanda dzemapurisa, dzinopa ropa dzedzimba dzinowanzove nekwaniso imwechete yekugona.
Nedzidzo chaiyo, Mufudzi wechiDutch anogona kugadzira imbwa yevarindi yakanakisa.
Nekudaro, parutivi rweflip, irudzi urwu rwunoitawo yakanaka imbwa yemhuri uye wekutamba naye. Iyi pooch inochinja-chinja inochinja-chinja, ichivaita mutambo wakanaka kune avo vanoda akasiyana siyana, emitambo yemitambo.
Sezvauri kuona, mabhureki brindle anouya mune ese maumbirwo uye saizi, kubva kune ane simba Dachshund kusvika kune hombe Dutch Mufudzi.
Imwe neimwe imbwa brindle inouya neayo ega zvayakanakira nezvayakaipira, asi zvechokwadi pane canine yemunhu wese!
Kana iwe uine vana kumba, iwe ungasarudze mhando dzakadai seStaffordshire Bull Terrier, Dutch Shepherd kana iyo Cardigan Welsh Corgi.
Avo vanogara mudzimba dzevakuru chete vanogona kusarudza imbwa dzakadai saAkita, Whippet kana Dachshund.
Iwe une brindle pooch kumba here kana iwe uri kufunga nezve kuitora imwe? Tisiyei mhinduro pazasi muchitizivisa.
19 Terrier Misanganiswa: Iyo Yakazara A kusvika Z Chinyorwa Chemhando dzeTerriers
Maitiro Ekudzidzisa Imbwa: Ndeipi Ndeye Akakodzera?
imbwa yakaoma kukosora uye retching
nzira yekuvaka bhokisi rewhelping yembwa huru
tsvarakadenga vakomana imbwa mazita embwa diki
golden retriever alaskan husky musanganiswa
boxer pitbull mix puppy mifananidzo